စိတ်ခံစားချက်နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ | ABC Radio Australia
စိတ်ခံစားချက်နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ
Lesson 13 of 14ပြောင်းရန်
ဒီတစ်ပါတ်ဟာ ​Mental ​Health ​Week ​လို့ခေါ်တဲ့ ​စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ​သတင်းပါတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ​အဲဒါကြောင့် ​ပြည်သူပိုင် ​မီဒီယာဌာနဖြစ်တဲ့ ​အေဘီစီကလည်း ​Mental ​As ​ဆိုတဲ့ ​ဆောင်ပုဒ်နဲ့ ​စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ ​ပတ်သက်ပြီး ​ဆက်တိုက်ဆိုသလို၊ ​သတင်းတွေ၊ ​ဆောင်းပါးတွေအပြင် ​ပညာရှင်တွေနဲ့ ​တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတွေကို ​ရေဒီယို၊ ​ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ ​အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ​ဆက်တိုက် ​တင်ဆက်နေပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ ​အေဘီစီ ​ရေဒီယို ​သြစတြေးလျက ​စိတ်ခံစားချက်နဲ့ ​ပတ်သက်တဲ့ ​အင်္ဂလိပ်စကားလုံး ​တချို့ကို ​တင်ပြမှာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ယောက်ယောက်က ​စိတ်ညစ်နေတဲ့အခါမှာ ​down ​in ​the ​dumps ​ဖြစ်နေတယ် ​ဒါမှမဟုတ် ​feeling ​down ​ဖြစ်နေတယ်လို့ ​ပြောလာနိုင်ပါတယ်။ ​Down ​in ​the ​dumps ​ဖြစ်နေတဲ့လူတွေ ​ဒါမှမဟုတ် ​feeling ​down ​ဖြစ်နေတဲ့လူတွေနဲ့ ​တွေ့တဲ့အခါမှာ ​ကိုယ်က ​သူတို့ကို ​cheer ​up ​စိတ်ပျော်ရွှင်အောင် ​လုပ်ပေးရမှာ ​ဖြစ်ပါတယ်။ ​cheer ​up ​လုပ်တာတွေအပြင် ​သူတို့ရဲ့ ​စိတ်တွေ ​ပေါ့ပါးသွားအောင်လို့ ​စိတ်မြင့်တင်ပေးတဲ့ ​lift ​the ​spirits ​ကိုပါ ​လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ ​spirits ​ကို ​raise ​လုပ်တာကတော့ ​သူတို့ ​စိတ်ခံစားချက် ​တိုးတက်လာအောင် ​ကိုယ်က ​စာနာမှု ​ပြတဲ့ ​စကားလုံးတွေ၊ ​အပြုအမှုနဲ့ ​ဆက်ဆံပြောဆိုတာမျိုး၊ ​အားပေးစကား ​ပြောဆိုတာမျိုး ​ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ ​စိတ်အပြောင်းအလဲ ​ဖြစ်အောင် ​အိမ်မှာ ​တကူးတကသူ့ကို ​ထမင်းစားဖိတ်လိုက်တာမျိုးတွေ ​တစ်နေရာရာကို ​အတူတူ ​သွားရအောင်လို့ ​ပြောလိုက်တာမျိုးတွေ ​ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်က ​သူ့ကို ​စိတ်ပျော်ရွှင်အောင်၊ ​စိတ်ပြေလက်ပျောက်ဖြစ်အောင် ​လုပ်လိုက်လို့ ​သူရော ​ကိုယ်ရော ​ပျော်ရပြီ ​ဆိုရင်တော့ ​နှစ်ယောက်စလုံးက ​happy ​campers ​ဖြစ်နေတာပါ။
Happy ​campers ​ရဲ့ ​အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ​လက်ရှိအခြေအနေကို ​ကျေနပ် ​တင်းတိမ်နေတာကို ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ ​အိမ်သစ်မှာ ​သူတို့တွေ ​ပီတိဖြစ်နေတယ်လို့ ​မထင်မိဘူးလားလို့ ​မေးချင်ရင်တော့ ​Don’t ​they ​look ​like ​happy ​campers ​in ​their ​new ​house? ​လို့ ​ပြောနိုင်ပါတယ်။
သူတို့ရောက်ရှိနေတဲ့ ​အခြေအနေမှာ ​ပျော်ရွှင်မနေတဲ့ ​အခါမှာလည်း ​not ​ကို ​happy ​hamper ​နဲ့ ​တွဲပြီး ​အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
လက်မှတ်ရဖို့ ​စောင့်နေတဲ့ ​လူတွေကို ​ကြည့်ရတာ ​သိပ်ပျော်ရွှင်နေပုံ ​မပေါက်ဘူးလို့ ​ပြောချင်ရင် ​Those ​people ​waiting ​for ​tickets ​don’t ​look ​like ​happy ​campers. ​လို့ ​ပြောနိုင်ပါတယ်။ ​ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ​လွယ်လွယ်ကူကူ ​unhappy ​campers ​လို့လည်း ​သုံးနိုင်ပါတယ်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံသားတွေက ​တအားပျော်ရွှင်နေတဲ့အခါမျိုးမှာ ​happy ​as ​Larry ​ဆိုတဲ့ ​စကားကို ​သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
Happy ​as ​Larry ​ဆိုတဲ့ ​စကားစုက ​သြစတြေးလျနိုင်ငံကနေ ​အခြေခံသလား၊ ​နယူးဇီလန်မှာ ​အခြေခံပြီး ​ဖြစ်လာသလား ​ဆိုတာကို ​လူတွေ ​မသိကြပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ​သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ ​Larry ​Foley ​ဆိုတဲ့ ​လက်ဝှေ့သမား ​ရှိခဲ့ပါတယ်။ ​အဲဒီလူက ​တချိန်လုံး ​ပျော်ရွှင်နေလို့ ​happy ​Larry ​ဆိုတဲ့ ​စကားစုကို ​အသုံးပြုကြတာလား ​ဒါမှမဟုတ် ​၁၈၇၉ ​ခုနှစ်တုန်းက ​ကျင်းပတဲ့ ​လက်ဝှေ့ပွဲမှာ ​Larry ​Foley ​အနိုင်ရလို့ ​ပျော်ရွှင်တာကို ​ကြည့်ပြီး ​ပြောတာလား ​ဆိုတာကလည်း ​စဉ်းစားစရာပါ။ ​အဲဒီအချိန်တုန်းက ​ပေါင်ငွေ ​တစ်ထောင်ဆုကြေး ​ရရှိခဲ့ပြီး ​ဒီနေ့ခေတ်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင် ​ဒေါ်လာ ​တစ်သိန်း ​ရရှိတဲ့အတွက် ​အဲဒီအတွက် ​Larry ​Foley ​က ​ပျော်ရွှင်တာလည်း ​ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ​ဒါ့အပြင် ​Happy ​နဲ့ ​Larry ​ဆိုတဲ့ ​စကားကလည်း ​အသံထွက်ခြင်း ​ဆင်လို့ ​အသုံးပြုကြတာလည်း ​ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တအားကို ​ပျော်ရွှင်တဲ့အခါမှာ ​happy ​as ​Larry ​ကို ​အသုံးပြုကြသလို ​အဲဒီထက်မကတဲ့ ​ပျော်ရွှင်မှုအကြောင်းကို ​ဖော်ပြချင်တဲ့အခါမှာတော့ ​over ​the ​moon ​ဆိုတဲ့ ​အသုံးအနှုန်းကို ​သုံးနိုင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာနဲ့ ​လရဲ့ ​အကွာအဝေးဟာ ​ကီလိုမီသာ ​သုံးသိန်း ​ရှစ်သောင်းလောက် ​ရှိတာကြောင့် ​over ​the ​moon ​ဟာ ​လသာမက ​လရဲ့ ​နောက်နားအထိကို ​ပျော်ရွှင်တယ်ဆိုတာကို ​ပြောခြင်း ​ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာမှာဆိုရင် ​ဖေကြီး ​မေကြီးကို ​မိုးလောက်ကြီး ​ချစ်ပါတယ်လို့ ​ပြောကြသလိုပါပဲ ​မနိုင်းတုနိုင်တဲ့ ​အပျော်မျိုးနဲ့ ​ပျော်ရွှင်တဲ့အခါမှာတော့ ​over ​the ​moon ​ဖြစ်နေတယ်လို့ ​အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
ဥပမာ ​John ​got ​engaged ​today ​and ​he ​is ​over ​the ​moon. ​လို့ပြောရင် ​“ဂျွန်တစ်ယောက် ​ဒီနေ့ပဲ ​စေ့စပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ ​အင်မတန်ကိုမှ ​ပျော်ရွှင်နေတာလေး” ​လို့ ​ပြောသွားတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
လူတွေက ​ပျော်ရွှင်တဲ့အခါမှာ ​jump ​for ​joy ​လည်း ​လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ​အထူးသဖြင့် ​တစ်ခုခုကို ​အောင်နိုင်လို့ ​ပျော်ရွှင်ကြောင်း ​ပြသတဲ့အခါမျိုးမှာ ​လုပ်တတ်ကြပါတယ်။
ဆယ်တန်း ​စာမေးပွဲ ​အောင်တာပဲ ​ဖြစ်ဖြစ် ​ကိုယ်အားပေးတဲ့ ​ဘောလုံး ​အသင်း ​ဂိုးသွင်းတဲ့အခါပဲ ​ဖြစ်ဖြစ် ​ထခုန်ပြီး ​ပျော်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါမျိုးမှာ ​jump ​for ​joy ​လုပ်နေတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ပါတ်ဟာ ​သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ ​စိတ်ကျန်းမာရေး ​သတင်းပတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ​စိတ်နဲ့ ​သက်ဆိုင်တဲ့ ​အင်္ဂလိပ်စာတွေကို ​တင်ဆက်လိုက်တာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်သောက ​ရောက်နေလို့ ​အကြံဥာဏ်တွေ၊ ​အကူအညီတွေ ​လိုအပ်ရင်တော့ ​ဆရာဝန်နဲ့ ​သွားရောက်တိုင်ပင်တာမျိုးတွေ ​လုပ်သင့်ပါတယ်။ ​သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ ​ရှိနေတဲ့ ​လူတွေကတော့ ​၂၄ ​နာရီပတ်လုံး ​ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ ​131114 ​ဒါမှမဟုတ် ​1800 ​18 ​7263 ​ကို ​ဖုန်းဆက်ပြီး ​တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေ ​လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ​ဒါမှမဟုတ် ​www.sane.org ​ဆိုတဲ့ ​ဝဘ်ဆိုက်ကို ​သွားပြီးတော့လည်း ​အဆက်အသွယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။